GvSIG, oo la shaqeynaya faylasha LIDAR - Gofumed
GvSIG, la shaqeynta faylasha LIDAR
Disember, 2008 GvSIG
Waqti xaadirkan, codsiyada kala duwan ee farsamada ayaa la fuliyey LiDAR (Nidaamka iftiinka iyo raadinta) kaas oo ka kooban cabbiro fog oo dhulka ah iyadoo loo marayo nidaamka laysarka. Marka loo eego macluumaadka hadda jira ee DIELMO, hadda Airborne LiDAR Waxaa ugu sax ah jiilka of daydo dhul digital la 1 ama 2m xal aan ollogga ah ee goobo badan oo dalka, iyadoo sax fiican height 15cm iyo fulinta ah cabbirka XYZ dhabta kasta technology mitir oo laba jibbaaran.
GvSIG maalmihii la soo dhaafay ayaa lagu soo bandhigay qandaraas kordhin si xor ah loo yeedhay gvSIG DielmoOpenLiDAR in lagu daro awoodda si ay u maareeyaan iyo files view ee .Oo LIDAR iyo .bin qaabab, had iyo jeer isagoo qasdigiisu yahay ma dilay agabyada kombuyuutarka iyo muujiyaan karaa labada Muga weyn (boqolaal gigabytes) xogta LiDAR cayriin (daruur iyo dhibco aan joogto ahayn in format QASHIN) isa macluumaadka kale juqraafiyeed ee gvSIG.
DielmoOpenLIDAR waxay u ogolaataa in ay dalbato calaamado otomaati ah sida waafaqsan dhererka, xoojinta iyo kala-soocida qaabka aragtida. Marka fidinta lagu dhejiyo, waxaad u kala saari kartaa xajmiga dhibcaha sida pixels, markaa markaad meel fog ka maqan tahay ma arki doontid iyo markaad u dhowdahay waxaad arki doontaa kuwa waaweyn.
Sidan oo kale marka lagu dhejiyo lakabyo cusub, mudada loo baahn yahay ee faylasha LIDAR waa la furfuri karaa.
Qeybinta sida waafaqsan dhererka:
Tani waxay muujinaysaa halkan, eeg sida geedku u kala saari karo dherer ahaan, laga bilaabo dhismaha dhulalka dabiiciga ah sida ku xusan guryaha loo qaabeeyey calaamadaynta.
Qeybinta sida waafaqsanaanta
Aragti la mid ah ayaa lagu muujiyay garaafka, laakiin waxaa lagu qeexay xoogsi ayadoo loo eegayo xaddiga lagu qeexay isticmaalaha.
Codsigan waxaa sameeyay DIELMO, boggeeda waxaad ka soo qaadan kartaa kordhinta nidaamyo kala duwan, buug-gacmeedka iyo koodhka ilaha.
Dhanka kale, waxaan ka faa'iideysanayaa horumarinta shirkaddan, oo bixisa, marka lagu daro adeegyadeeda, macluumaad aad u wanaagsan oo ku saabsan teknoolojiyada LIDAR, qaar ka mid ah isku xirka ilaha internetka iyo alaabta bilaashka ah.
Noocyada muuqaalka dijitaalka ah Sawir-qaadashada Dijital ah
MDT saxsanaan sare
MDT + dhismayaasha (5m)
MDT bilaash ah (90m)
MDT bilaash ah (1000m)
MDT ka soo jiidatus ah
Miisaanka 1: 25.000
Miisaanka 1: 200.000
Miisaanka 1: 1.000.000
Miisaanka 1: 2.000.000
Miisaanka 1: 50.000
Khariidadaha qaabka Freehand + TIF
Post Previous«Previous Ku saabsan irridaha
Post Next Soo bandhigida gvSIG iyo IskaashigaNext »
4 Jawaab "GvSIG, la shaqeynta faylasha LIDAR"
sida sadarka uu leeyahay, "marka loo fiiriyo waxa bogga DIELMO leeyahay," hadaad jeceshahay waad aqrin kartaa asalka asalka ah oo si fiican u sharxay.
Waxaa laga yaabaa in hal maalin aanu u dallacno boosteejo ah layligan
... kor u kaca! Wareegtada ayaa xasuusin doonta tan inta ka hartay cimrigayga
Waxaan doonayay inaan ku waydiiyo ama ku weydiiyo inaad sharaxdo - haddii aysan aheyn wax dhib ah - waxa dhab ahaantii weedha ka hadlaysaa:
«... iyo sameynta cabir dhab ah oo loo yaqaan 'XYZ' ee mitir kasta oo laba jibaaran.»
Waad ku mahadsan tahay wax badan ..
Sawirada LIDAR? 😕
Waxaan u maleynayey in LIDAR ay qabato dhibcaha 🙄